mozilla firefox ultimate 2010 — MYSTERY ZILLION
- 100+ Warez Forums Auto-Poster
4.29MB - cnc0995
ပြင်ထားတဲ့ကောင်နဲ့တူတယ်ဗျ။ သူ့ Official site မှာတော့ 3.5.3 ပဲတွေ့သေးတယ်။ သုံးလို့အဆင်ပြေလားဗျ။ 2010 သုံးလို့ထူးတာလေးတွေတွေ့ရင် ပြောပြပါဦး။
* Convert Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, rich text (RTF) and plain text files to Adobe PDF files.
* Convert PDF files to plain text.
* Extract images from PDF files.
ကို rlay အနေနဲ့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အောက်က
"Rapidshare software များကို ဒီမှာတင်ပါပြီ " ဆိုတဲ့ Thread မှာ ပေါင်း၍ တင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ခေါင်းစဉ်ကွဲ ၊ ရည်ရွယ်ချင်တူ Thread နှစ်ခု ဖြစ်နေတယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ur link is hardly
to donwload in my bagan net line
pls upload other sharing link
www.ifile.it thanks u
kontwins wrote: »
ဒီလိုလုပ်ပါလား အခုက နေ ့ခင်းဘက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဆီမှာကောက်နက်ရှင်က အဆင်ပြေမှာ
မဟုတ်ဘူး အကိုဆီမှာ your-freedom ၇ှိတယ်မလား အဲ့ဒါနဲ ့ဒေါင်းလေဗျာ link ကိုမဖွင် ့ခင်
your-freedom ကိုဖွင် ့ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် တကယ်လို ့idm နဲ ့ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် idm option က poxy tab မှာ သုံးခုစလုံးကို 127.0.0.1 ရယ် 8080ရယ်ကို လိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့ အဆင်ပြေမှာပါ အဲ့တာ your-freedom နဲ ့ကျော်မှနော်